Top 10 4K Video Converter 2015
Top 10 video converters 4k xor ah oo daaqadaha iyo Mac
Annagu waxaannu ku yaqaanaan xal 1080p ka arrin sano qaar ka mid ah hadda. Si kastaba ha ahaatee, HD ayaa qaaday boodda oo cusub oo la 'UHD 4k' bixiya ka badan tahay xal 1080p. UHD 4k waxaa inta badan loo isticmaalaa in shineemo digital la 4096x2160 sidii xal pixel ama telefishinka HD Ultra la 3840 × 2160 sida ay xal. Technology ayaa 4k saamaxaya kuwa isticmaala in ay ku raaxaystaan ​​shaashad aad u faahfaahsan oo ah filimada iyo videos ka hor kaas oo aan suurto gal ahayd. 4k isagoo cusub, waxaa aan ku jira hindisooyin badan oo taageera 4k iyo halkii fursadaha xadidan oo ay ku ciyaari videos, kuwaas oo ah ciyaaryahan video 4k.
Qeybta 1: Top 5 4k video converters daaqado
Qeybta 2: Top 5 4k video converters u Mac
Windows iyo Mac users isticmaali kartaa Wondershare Video Converter Ultimate, convertor xirfadle u 4k videos. Wondershare Video Converter Ultimate Badalo kartaa video mid ka mid ah xal kasta oo 4k format. Sidoo kale, waxa uu u bedeli karaan wax video 4k kasta oo ah qaabab video caadi ah AVI, MP4, MOV, WebMD, wmv, FLV, DivX sidoo kale la mid ah HD.
Waxaad u bedeli karaan wax video ee 3840 x 2160 ama 4096 x 2160 xallinta 4k.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad xaalkaa video ah 4k sida dalagga, jar, darsamaan, watermark, isku shaandheyn, saamaynta iyo qaar badan.
Waxaad u ciyaari kartaa 4k videos in qalab aad iyo sidoo kale iyaga oo si toos ah u soo bixi YouTube isticmaalaya downloader ee loo dhisay arjigan.
Wondershare Video Converter Ultimate Kaa caawinaysaa in aad loogu badalo ka 4k videos for kombuyuutarrada gacanta sida qalabka Android, iPad, iPhone, telefishin, DVD, iwm
Qor wax kasta oo 4k videos ka hoorto goobaha internetka.
Dheeraad ah ka baro halkan >>
Codsigan aad siisaa nooc kasta oo diinta laga yaabaa in aad u baahan tahay halka la UHD 4k video files shaqeeya.
Waxay ka caawisaa si loogu badalo 4k videos in AVI, MKV, wmv, MOV iyo qaabab kale.
Waxa kale oo aad u bedeli karaan videos soo galeen 3D isticmaalaya barnaamijka codsigan.
Waxa ay u ogolaataa user ay ku darto subtitles galay video files iyo taageerada Apple ProRes, DNxHD iyo qaabab kale Deji xirfadeed.
Pavtube Video Converter Ultimate waa barnaamij awood leh in uu leeyahay muuqaalada kala duwan sida BDMagic, DVDAid, Video convertor iyo editor video. Tani barnaamijka oo dhan in mid ka mid ah sidoo kale waxay bixisaa super-degdeg ah xawaaraha diinta u videos.
Sida barnaamij kasta oo beddelaya kale, waxay u bedeli karaan qaabab file kala duwan sida AVI in wmv iyo wixii la mid ah.
Sidoo kale, waxaad soo dhaadacday oo karo videos in YouTube qaab saaxiibtinimo oo u oggolaan doonaa Upload dhakhso ah videos in YouTube.
Sida editor ah, aad jar kartaa video ama noola si habboon looga baahan yahay.
Beddelidda nuurka ama ku daray subtitles waa muujinta kale muhiim ah oo barnaamijkan.
Intaa waxaa dheer, waxaad heli kartaa gurmad ah ee filimada Blu-ray 3D si 3D / 2D video files sida MP4, AVI iyo kuwa kale.
Pavtube Video Converter Ultimate sidoo kale taageertaa teknoolajiyada xawaaraha NVIDIA CUDA iyo ATI Stream.
Haddii aad tahay filim qaadasho khatar ah, waa inaad ogaataa in kaamirooyinka shineemo BlackMagic waa mid ka mid ah kaamirooyin ugu wanaagsan ee la heli karo. Barnaamijkan waa mid aad u fudud in la isticmaalo sida kaliya aad u leeyihiin in ay ku shuban file video ka galay Converter ah, doortaan qaab wax soo saarka aad la doonayo, qabsato tayada iyo heerka jir ah goobaha guji diinta.
Waxaad si fudud u dajiyaan karaa iyo edit 4k videos galay caanka ah software video tafatir sida jilitaankii, AVID, Final Cut Pro, iyo qaar badan oo la isticmaalayo BlackMagic 4k video Converter.
Waxaad u bedeli karaan 4k BlackMagic ah videos qaab in la saxar karaa in wax software video tafatirka.
Waxaa la socon kara labada Windows PC iyo Mac kombiyuutarada.
Faylal loo rogi karaa MOV, Mpg, AVI iyo qaab kale oo aad u fudud.
Mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan waa in ay diyaar u ah free download.
On Tv 4k, ma dhammaan noocyada kala duwan ee files video, sida joogtada ah AVI, MP4, MOV iyo wixii la mid ah, waxay awoodaan inay la ciyaari aan kaalmo ka mid ah qalab dibadda. Sidaas darteed, si aad u daawato videos on your screen 4K UHD, waxaad u baahan doontaa software sida 4K Converter TV.
4K Converter TV saamaxaya kuwa isticmaala si uu u daawado filimada ee ay doortaan television 4K ah oo ku saabsan.
Codsigan boholo qaabab video caanka ah ee xallinta 4k.
Waxaa diyaar u ah dhammaan nidaamka Windows iyo Mac.
Convertor A xirfad u 4k videos. Wondershare Video Converter Ultimate Badalo kartaa video mid ka mid ah xal kasta oo 4k format. Sidoo kale, waxa uu u bedeli karaan wax video 4k kasta oo ah qaabab video caadi ah AVI, MP4, MOV, WebMD, wmv, FLV, DivX sidoo kale la mid ah HD. Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa 4k Videos ka goobaha la wadaago video iyo gubi 4k videos in DVD la Software ah
2. EaseFab Video Converter u Mac
EaseFab 4K Video Convertor waa mid ka mid ah ugu sahlan in ay isticmaalaan video Converter u diinta ee 4k videos. Waa video Converter xirfadeed ee dhammaan dadka isticmaala Mac taas oo uu leeyahay ah ururinta cajiib ah oo balaadhan oo ah muuqaalada.
Qiimaha alaabta waa $27.96 oo waa codsi video Converter jaban xirfadeed ee suuqa.
Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa tijaabo ah oo lacag la'aan ah si loo ogaado haddii ay tahay lacag iyo shuruudaha ku kacaya.
Waxaa soo dhaadacday oo karo 4k videos in 1080p ama 720p HD ama xataa qaab video SD.
Waxaad isticmaali kartaa software si loogu badalo aad video barnaamijyada kala duwan sida iMovie, laxamiistaha Media AVID, pro Goo Final, iwm iyo sidoo kale ProRes, DVCPRO, MPEG-3 iyo kuwa kale.
Kale oo ka duwan isagoo user saaxiibtinimo, waxa uu siiyaa xawaare aad u dheereeya diinta la tayada wax soo saarka sare.
Sida kale oo editor video, waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad jar, dalagga iyo watermark faylasha video.
MacX Video Converter Pro waa xirfad 4k video convertor ah oo u oggolaan 4k filimka diinta, duuban oo tafatir sida muuqaalada default ay.
Software Tan waxaa ka doorteen si loogu badalo oo dhan HD iyo SD video qaabab loo jecel yahay galay 4k video files.
Sidoo kale, waxaad u bedeli karaan 4k YouTube ku videos in AVI, MP4, MOV iyo qaabab kale.
Waxaad ku wareejin kartaa 4k videos in aad iPhone 6 / lagu daray, Galaxy qod6 iyo qalabka kale.
Software Tani waxay u ogolaaneysaa dadka isticmaala si ay u soo bixi 4k filimada ka video websites online oo ay la socdaan 83 X 4K video xawaaraha diinta.
MacX Video Converter Pro xamili karaan labada qaab video SD iyo HD waxayna siisaa doorasho goob hagaajin karo dadka isticmaala ay.
4. WinX HD Video Converter u Mac
Converter video Tan waxaa ku raran yihiin daraasiin muuqaalada bixiya xalal diinta video HD ka kaaftoomi lacag la'aan ah Mac. Waxaa loogu badalo ku riyoonayaa / HD-kaamirada videos, videos Blu-ray, MKV, HDTV, 4K UHD videos, MPEG-TS, BDAV, MOV, OGM, wmv, FLV, TS, MPEG, AVI caadiga ah iyo QT videos. Tani waa 83 jeer HD dhaqso, anfacaya iyo wejiyo video Converter u MAC in sidoo kale la Timaadda presets qalab badan oo iPad Pro, iPhone 6S / 6 (Plus), mini 4, Apple TV (4), Air 2, Lugood, Samsung Galaxy Note 5 / qod6 ku laayeen +, Android, Chromecast, dhulku Pro 3, WP8, Amazon huriyaan dab, PSP, Madaxweyne Siilaanyo, iwm
Mac Screen oo Camera Video taariikhqorihii
Edit / xamili Videos la Facility
Hillaac Video Fast Conversion Speed
Output la yaabka leh Tayada Video Audio
Taageerada HD Multi-track iyo Blu-ray Video
Beddelaan Videos u Apple oo Android
Online Video Downloader iyo Converter
Pre-dhisay Photo Muqaal abuura
Converter Tani waxay ka caawisaa in diinta XAVC 4K (3840x2160 iyo 4096x2160) ama 2k footage qaabab loo jecel yahay sida wmv, AVI, MP4, Mpg, FLV, MP3, iwm XAVC 4K video Converter u Mac si xor ah u ordi karo Mac 10.5-10.8 (Mountain Libaaxa ).
> Resource > Beddelaan > Top 10 4k video converters daaqado iyo Mac